टेलिकमले ल्यायो सानो ‘भोल्यूम’को डाटा प्याकेज — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, समचार, सूचना प्रविधी → टेलिकमले ल्यायो सानो ‘भोल्यूम’को डाटा प्याकेज
November 6, 2015५४७ पटक
२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सानो ‘भोल्यूम’को डाटा प्याकेज ग्राहकमाझ ल्याएको छ । ग्राहकबाट सानो डाटा प्याकेजको अत्याधिक माग भएकोले यस्तो प्याकेज ल्याएको टेलिकमले जनाएको छ ।
महसुल दर (कर बाहेक)
जीएसएम (प्रिपेड/पोष्टपेड) रू. ८।- १० एमबी २ दिन
रू. ३५।- ५० एमबी १० दिन
सीडीएमए (प्रिपेड/पोष्टपेड) रू. १५।- ४० एमबी ३ दिन
नयाँ डाटा प्याकेज आइतबारदेखि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । टेलिकमले ८ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्मको दुई दिनदेखि १० दिनसम्म अवधि भएको प्याकेज ल्याएको हो । उल्लेखित महसुल दरमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिने छ ।
जीएसएम पोष्टपेडमा डाटा डाटा सुविधा लिनका लागि डाटा र आफुले चाहेको भोल्यूमको बीचमा खाली स्पेस राखेर १४०० मा एसएमएस पठाउनुपर्ने हुन्छ । जीएसएम पोष्टपेडमा प्रयोग हुन बाँकी रहेको डाटा भोल्यूम थाहा पाउन सीबी टाइप गरी १४०० मा एसएमएस पठान सकिन्छ ।
जीएसएम प्रिपेड र सीडीएमए प्रिपेड तथा पोष्टपेडमा डाटा सुविधा लिनका लागि आफुले चाहेको डाटा भोल्यूम उल्लेख गरी १४१५ मा एसएमएस पठाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि ४० एमबी डाटा लिनुपरेमा DATA40MB टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस पठाउन सकिन्छ ।